အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့၌ မီးလောင်မှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားရာ လူ ၁၉ ဦး ထက်မနည်း သေဆုံး - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တွင် ဖြစ်ပွားသော မီးလောင်မှုအား မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝိုင်းဝန်းငြိှမ်းသတ်နေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နယူးယောက် ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့တွင် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်က မီးလောင်မှုတစ်ခု အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပွားရာ ကလေးငယ် ၉ ဦးအပါအဝင် လူပေါင်း ၁၉ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားကြောင်း နယူးယောက်မြို့တော်ဝန် Eric Adams က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒီကနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ အိမ်နီးချင်း ၁၉ ယောက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ် ။ သိပ်ကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ ၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလာရောက်ပြီး အသက်သေဆုံးသွားရသူတွေအတွက် ဝိုင်းဝန်း ဆုတောင်းပေးကြရအောင်ပါ ။ အထူးသဖြင့် အရမ်းကို အပြစ်ကင်စင်တဲ့ ကလေးငယ် ၉ ဦးအတွက်ရောပေါ့” ဟု Adams က တွစ်တာလူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
နယူးယောက်မြို့တော် Bronx ရပ်ကွက် ၊ ၁၈၁ လမ်း ၊ အမှတ် ၃၃၃ တည်ရှိရာ အထပ်မြင့် လူနေအိမ်ခန်းတွဲ မီးလောင်မှုအတွင်း မီးညွန့်အားထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် နယူးယောက်မြို့တော် မီးသတ်ဌာန(FDNY) ကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးထဲမှာ သက်ရောက်မှုကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတိုင်းအတွက် ဘာတေွ ဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲ ဆိုတာ သိနိုင်အောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု လုပ်သွားမှာပါ : ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မြို့တော်ကြီးဟာ ရှေ့ဆက်ပြီး ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူ ရှိနေမှာပါ ” ဟု Adams က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် မြို့တော်ဝန်က မီးလောင်မှုသည် ထိန့်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းကြောင်း တနင်္ဂနွေ နံနက်အစောပိုင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒါဟာ ထိန့်လန့်တုန်လှုပ်စရာတစ်ခုပါ ၊ သိပ်ဆိုးဝါးလွန်းပါတယ် ၊ နယူးယောက်မြို့တော်အတွက် ထိခိုက်နာကျင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲ ၊ ဒီမီးလောင်မှုရဲ့ သက်ရောက်မှုဟာ ကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးအတွက် ထိခိုက်နာကျင်မှု ၊ ဆို့နစ်ကြေကွဲမှု အဆင့်တစ်ခုကို အမှန်တကယ်ယူဆောင်လာခဲ့တာပါ” ဟု ၎င်းက သတင်းထောက်များအားပြောကြားခဲ့သည်။ “ မျက်မှောက်ခေတ် ကျွန်တော်တို့ ကြုံဖူးသမျှ အဆိုးရွားဆုံး မီးလောင်မှုတွေထဲမှာ တစ်ခု အပါအဝင်ပါပဲ” ဟုဆိုသည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိသော လူ ၃၂ ဦးကို ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။ လူ ၉ ဦးမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဒဏ်ရာရရှိထားပြီး အခြား ၂၂ ဦး၏ ဒဏ်ရာအခြေအနေမှာ အသက်အန္တရာယ်မဆိုးရိမ်ရတော့ကြောင်း ၊ ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးကိုလည်း ဆေးရုံပို့ထားရကြောင်း Adams က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အခင်းဖြစ်နေရာသို့ မြို့တော်ဝန် Adams နှင့်အတူ သွားရောက်ခဲ့သည့် နယူးယောက်မြို့တော် မီးသတ်ဌာန(FDNY) ကော်မရှင်နာမင်းကြီး Daniel Nigro က မီးလောင်မှုသည် ယင်းအိမ်ရာ၏ ဒုတိယထပ်နှင့်တတိယထပ် နှစ်ခန်းတွဲအိမ်ရာတစ်ခုမှ စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။ အိမ်ရာတံခါးမှာ ပွင့်နေခဲ့ရာ ၁၉ ထပ် အဆောက်အဦကြီးတွင် မီးညွန့် နှင့် မီးခိုးများ လျင်မြန်စွာ ကူးစက်ပြန့်နှံ့သွားစေခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒါဟာတကယ့်ကို ကြေကွဲစရာအဖြစ်အပျက်ပါ ၊ အဲဒီနှစ်ခန်းတွဲအိမ်ရာက မီးလောင်မှုသတင်း ဖုန်းဆက်သတိပေးချက်ရပြီးပြီးချင်း သုံးမိနစ်အတွင်းမှာပဲ မီးသတ်သမားတွေဟာ အဲဒီနေရာကို ရောက်ရှိသွားပါတယ် ၊ သူတို့ဟာ မီခိုးလုံးကြီးတွေ မီးတောက်မီးညွန့်ကြီးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အထဲကို ဝင်သွားကြပါတယ်။ မီးခိုးတွေက အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကို ဖုံးလွှမ်းနေတာပါ၊ ဒါဟာ သိပ်ကို ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပါ ၊ မီးသတ်သမားတွေဟာ ထိခိုက်သူတွေကို အထပ်တိုင်း နဲ့ လှေကားခွင်တိုင်းမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလူတွေ အသက်ရှူကြပ်တာမဖြစ်ရအောင် အပြင်ကို သယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ် ” ဟု Nigro က ရှင်းပြသည်။
“ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့မြို့တော်ကြီးမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မကြုံဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကြီးပါ။ မီးဘယ်လို စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့လဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူး ၊ အဲဒါကို သိနိုင်ဖို့ နယူးယောက်မြို့မီးသတ်ဌာနက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
Update: At least 19 people killed in New York City major fire
NEW YORK, Jan.9(Xinhua) — At least 19 people, including nine children, lost their lives inamajor fire in New York City on Sunday, New York City Mayor Eric Adams confirmed.
“We’ve lost 19 of our neighbors today. It’satragedy beyond measure. Join me in praying for those we lost, especially the9innocent young lives that were cut short,” Adams tweeted.
Photos- Firefighters are seen in front of the apartment building in Bronx, New York, the United States, on Jan. 9, 2022. (Photo by Michael Nagle/Xinhua)